ZAGGkeys Folio: Keyboard tsara indrindra ho an'ny iPad Air | Vaovao IPhone
ZAGGkeys Folio: Keyboard tsara indrindra ho an'ny iPad Air
Ny fampiasana ny iPad Air dia mahafinaritra, mahafinaritra ny fikirakirany sy ny fahazavany. Tsy hahita zava-baovao momba an'ity iPad farany ity aho. Saingy mbola mieritreritra an'izany aho mba hahazoako tombony betsaka amin'ny iPad mila manampy kitendry ianao. Androany isika hiresaka momba ny fitendry antsoina hoe ZAGGkeys Folio izay miaraka amin'ny iPad Air dia mandeha toy ny fonon-tànana.
Ny ZAGGKeys Folio dia mitovy amin'ny maodely azo alaina ho an'ny iPad Mini. Fitaovana iray ihany io amin'ny ankapobeny fa lehibe kokoa mifanaraka tsara amin'ny iPad Air. Mifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth amin'ny iPad Air. Izy io dia miaro tanteraka ny iDevice rehefa mikatona ary mampiseho ny klaviny rehefa mivelatra izy. Rehefa mamoritra ny kitendry dia maty ny fitaovana ary mifoha rehefa apetakao izy hanombohana manoratra.
ny famaritana lehibe ny fitendry an'ity iPad Air ity dia:
Ambainy: 242,6 mm
Lalina: 17,7mm (aforitra amin'ny iPad Air)
Halalin'ny tsy misy iPad Air: 7,6mm
Milanja: 535 grama
Batterie: polyester lithium azo havaozina 950 mAh
Ny ambony dia lovia plastika tsotra izay ampidirina ny iPad Air. Ny iPad Air dia mifanaraka amin'ny tsindry iray izay hampitandrina antsika ny tena mety. Mba hampisarahana azy amin'ilay tranga dia tsy maintsy ahodinantsika moramora ny zorony fonony ary esorintsika ny iPad Air. Misy takelaka ao ambadika, izay mamela ny fanitsiana ny Tablet hametraka azy amin'ny zoro fijery isan-karazany arakaraka ny toe-javatra misy antsika.
Ny lakile mamaly haingana izy ireo ary tena tsara ny lalan'ny mitovy amin'izany. Misy laharana dimy fanalahidy, ao anatin'izany ny iray ho an'ny bokotra isa ary ny iray hafa miaraka amin'ireo fanalahidy manokana hampiasana ny iPad Air. Anisan'izany ny fanapahana, kopia ary apetaho tena ilaina amin'ny toe-javatra maro.
Ny Folio dia kitendry backlit izay manome famirapiratana telo sy loko fito: mena, maitso maivana, maitso maitso, manga mazava, manga mainty, lilac ary fotsy. Eo amin'ny ilany ankavia eo ambany amin'ny fitendry, misy lakile iray izay manondro ny androm-piainany. Avy amin'ny ZAGG no nitateran'izy ireo fa ny faharetana dia mety ho amam-bolana maro, amin'ny fampiasana roa ora isan'andro.
Ho fanampin'ny keyboard feno, mety tsara amin'ny fanoratana, Folio dia manana lakilasy efatra izay mety amin'ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny antontan-taratasy nefa tsy mila manindry ny efijery iPad. Izy ireo dia eo akaikin'ny bokotra manafoana / manoratra indray eo amin'ny laharana ambony.
Amin'izao fotoana izao ny vidin'ity kitendry backlit ho an'ny iPad Air ity dia Dolara 99.
Fanazavana fanampiny - ZAGGkeys Pro tranga vaovao misy klavier Bluetooth ho an'ny iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » ZAGGkeys Folio: Keyboard tsara indrindra ho an'ny iPad Air
Samson's Go Mic, ilay mikrô hanamboarana podcast
HiddenSettings7 mahita safidy miafina an'ny iOS 7 (Cydia)